Ampianarinay hampiasa Telegram Plus amin'ny horonantsary | Androidsis
Taorian'ny adihevitra rehetra nipoitra taorian'izay ny fandrarana goavan'ny mpampiasa WhatsApp Plus nataon'ny mpamorona ny WhatsApp, ny fampiharana tany am-boalohany ho an'ny Android. Ireo mpamolavola an'ny WhatsApp Plus Nanapa-kevitra ny hampitsahatra ny fanavaozana ny fampiharana azy ireo mahomby ary ankehitriny dia gaga anay ry zareo amin'ny fanombohana Telegram Plus maimaim-poana tanteraka ary misy manomboka izao ao amin'ny Google Play Store, fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android.
Raha ny fiheverako am-panetren-tena ho mpampiasa ny fampiharana Android roa dia samy WhatsApp como el telegrama. Ity iray ity mety ho fanentanana lehibe ilain'ny Telegram hametraka ny toerana tokony hisy azy hatramin'ny fotoana voalohany, ary farany hanaloka ny rindranasa mitarika amin'ny fisintomana ao amin'ny Play Store, izay tsy iza fa ny WhatsApp for Android. Raha te hahalala ny zavatra rehetra atolotry ny Telegram Plus anay sy ny fomba fampiasana azy ianao dia manoro hevitra anao aho hikitika "Tohizo ny famakiana", satria rehefa miditra ao amin'ilay lahatsoratra ianao dia hahita famerenana video feno izay hamahanay ny fampiharana Telegram Plus ary mampianatra anao tsikelikely ny fomba fampiasana azy izahay.
1 Inona no atolotry Telegram Plus ho antsika amin'ny Android?
2 Ahoana ny fampiasana Telegram Plus
Inona no atolotry Telegram Plus ho antsika amin'ny Android?
Telegram Plus ho an'ny Android, Izy io dia rindranasa iray voamarina tanteraka amin'ny fampiharana ofisialy Telegram ho an'ny Android, na dia misy fanampim-panakarana lehibe aza ao anatin'ny toe-javatra misy azy izay ahafahantsika miditra amin'ny sisintanin'ny style Design Material, izay nahitana fizarana iray hafa noho ny amin'ny fampiharana voalohany.
Fanampiny vaovao izay lazain'ny anarany amintsika ny zava-drehetra. Amin'ny anaran'ny theming hahita safidy maromaro isika hanodinana saika ny zavatra rehetra ao amin'ilay fampiharana. Avy amin'ny haben'ny endri-tsoratra, loko lohateny na avy amin'ny efijery lehibe na ankapobeny, amin'ny alàlan'ny efijery fifampiresahana na amin'ny efijery fifandraisana.
ny sasany safidy ahafahana manome lohahevitra feno ny fampiharana ary miaraka amina asa tsy mampino toa tahirizo ilay lohahevitra noforonina mivantana ao amin'ny fahatsiarovantsika anatiny, hahafahantsika manana na manana safidy hamorona sy hitahiry lohahevitra samihafa hahafahana mampiasa azy ireo, ohatra, arakaraka ny toe-pontsika na ny toerana misy antsika.
Ity misy fanadihadiana feno momba ny Telegram Plus izay ampianaranay anao tsikelikely ny fomba fampiasana Telegram Plus, ary fantaro, ohatra, ireo lafiny azontsika ovaina, inona no mitranga rehefa manova zavatra tsirairay na izay itahirizana ireo lohahevitra noforonina sy voatahiry avy amin'ny Telegram Plus.
Ahoana ny fampiasana Telegram Plus
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » [Lahatsary] Telegram Plus mety ho fanentanana lehibe tsy nananan'ny Telegram. Atorinay anao ny fomba fampiasana azy